Ko Toe: Happy Birthday .. KO TOE, June 30
Posted by MYO HAN HTUN at 1:18 PM
လိုအင်ဆန္ဒ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ...
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ ကိုတိုး (ခ) ကိုကို (ခ) မျိုးဟန်ထွန်း :)
ကိုကြီးတိုး ... မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနှင့် ထာဝရ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ
မိန်းမ ချောချောလေးလည်း မြန်မြန်ရပါစေဗျာ :P
ံပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ.. ကိုတိုး...
ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုအင်မှန်သမျှ ပြည်စုံပါစေ..
နောင် မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ချစ်သူခင်သူများနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ...
ဒီနှစ်မွေးနေ့ အတွက် ကိုတိုးပြုသမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ တွေအတွက် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ပါတယ်..
ဒါနဲ့အသက်သုံးဆယ်ပြည့်တာလား... ဒီပိုစ့်မှာ 30 ဆိုတာကြီးကို အကြီးကြီးတွေ့ လိုက်ရတော့ ကိုတိုးရဲ့ အသက် ၃၀ ပြည့်မွေးနေ့ အကြောင်း ရေးထားတာလို့ထင်လိုက်မိတယ်. :P
ပျော်စရာကောင်းတယ့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုတိုးရေ။ လူပျိုကြီးဘ၀က ကျွတ်ပါစေဆိုတယ့် ဆုတောင်းတယ့်လူတွေများနေတယ် ဟိ အင်း….မိန်းမလဲ မြန်မြန်ရပါစေ :D
ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၉-နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့... ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မနိုင်းနိုင်းရေ .. လူပျိုကြီးဘ၀က ကျွတ်ချင်တာကြာပေါ့ .. ဟီး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့ညီရေ ..
မိန်းမ ချောချောလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းမချောချောကြီးဖြစ်ဖြစ် ရတယ် .. ကြီးတာငယ်တာ အဓိက မကျဘူး၊ ချောရင်ပြီးတာပဲ .. ဟီး
@ Nay Nay Naing
ညီမ နေနေနိုင်ရေ ..
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက်ရော သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်တဲ့ အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသက်ကတော့ ၃၀ ကို ၁ နှစ်လျော့ပေါ့။ ၃၀ ဆိုပြီးတော့ ၁ နှစ် ပိုမတွက်လိုက်ပါနဲ့ .. သူငယ်ပြန်ချင်သေးလို့ပါ .. ဟီး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့ညီရေ .. “မိန်းမလဲ မြန်မြန်ရပါစေ” ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းတဲ့နည်းကို သဘောအကျဆုံးပါ။
.. လုပ်ပါဦးဟ .. မိန်းမ မြန်မြန်ရတဲ့နည်းလေးများရှိရင် .. ဟီး
ကိုမောင်လှရေ .. ကိုမောင်လှလို ကလေးချီတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကို သဘောကျမိတာအမှန်ပါ။ ကလေးအလွန်ချစ်
တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ လောလောဆယ်နေတဲ့ နေရာနားက ကလေးပိစီကွေးလေးတွေနဲ့ ပုစုခရုလေးတွေကို မြင်တိုင်း
မြူဆွယ်ရတာနဲ့ ချစ်ရတာ အမောသားပါ။ ကိုယ့်ကလေးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များချစ်မလဲဆိုတာကို ကိုမောင်လှတို့ ပိုနားလည်မှာပါ။ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ .. :)
မိန်းမ မြန်မြန်ရချင်ရင် မိုးရွာတိုင်း ထီးမဆောင်းတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်။ တေတတ်တယ်။ ဟီး... ချစ်သူရတဲ့နေ့မှပဲ ပျောက်သွားမှာပါလို့ အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်။ ဘယ်သူထီးဝယ်ပေးပေး တောင်ပြော မြောက်ပြော ဆင်ခြေပေးပြီး ငြင်း တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်။ အလကားရရင် ယူသာယူ။ ဘယ်လောက်မိုးရွာမိုးရွာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ထီးမဆောင်းဘူးဆိုတဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်။ ချစ်တဲ့သူက ကျွန်တော့်ကို ထီးလိုက်မိုးပေးပြီး မိုးရွာထဲမှာ လျှောက်သွားချင်လို့ဆိုတဲ့ နေ့ရက်တွေကို အမြဲတမ်းဆောင့်မျှော်နေလို့ပါပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးကိုဖျောက်။ (ရူးတယ်နှမ်းတယ်ပြောလည်း မတတ်နိုင်ဘူး)။ HAPPY 29 BIRTHDAY, KO TOE. MAY YOUR DREAMS COME TRUE THOUGHOUT THIS YEAR.
@ Ye Lwin Oo (WILLIAM)
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျ။ ရဲလွင်ဦးရေ .. “သက်ငယ်စကား သက်ကြီးကြားတဲ့” ဗျ ..
ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီ အကျင့်တွေကို ဖျောက်ပါတော့မယ် .. ဟီး
July 1, 2007 at 8:44 AM
Ko Nay Gyi said...
အစ်ကိုရေ မွေးနေ့ မှသည်နောင် နှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ...။ ကဗျာလေးကို ချီးကျူးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Ko Toe, Happy Birthday par. Sorry for belated wish naw.
@ Ko Nay Gyi
ကိုနေကြီးရေ .. ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဖူးတင်ပါတယ်။
ရပါတယ် .. မမယ်လိုဒီမောင် .. ကျေးဖူးတင်ပါတယ်။
နောက်ကျတွားပေမဲ့လဲ ချိတ်မဆိုးဝူးလို့ပဲ ထင်လို့.. ဆုတောင်းလိုက်ပါဒယ်..
ကိုတိုးးကြီးးး ဒီတခါမိုးရွာရင် ထီးလိုက်မိုးပေးတဲ့ ချစ်သူမြန်မြန်ရပါချေ... :P:P:P
ချိတ်မချိုးပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအမိန်